Dagaalo ka dhacay duleedka Kismaanyo,iyo ciidamada dawlada oo guul sheegtay. – Radio Daljir
Dagaalo ka dhacay duleedka Kismaanyo,iyo ciidamada dawlada oo guul sheegtay.
Agoosto 29, 2012 2:06 g 0
Kismaanyo-29-Aug-2012-Dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dawlada KMG ah ee Somalia iyo Ururka Al-shabaab ayaa ka dhacay inta u dhexaysa magaalada Kismaanyo iyo Degmada Afmadow ee gobolka Jubbadda Hoose.
Saraakiisha ciidamda Somalida ee kusugan jiidaha dagaalka ayaa Radio Daljir u sheegay in ciidanku hada Kismaanyo u jiro 50 km, Col: Maxamed Cabdi Xasan oo ah taliyaha ciidamda ee gobolada Jubooyinka, ayaa sheegay in hada ay joogaan duleedka magaalada Kismaanyo ayna saacadaha soo socda qaban doonaan magaaladaasi.
Col: Maxamed Cabdi Xasan wuxuu sheegay in Al-shabaab ay ka dileen 24 askari oo 10 kamid ah yihiin Ajaanib isugu jira Cadaan iyo Madow sida uu hadalkiisa u dhigay.
“Waan soo aruurinay hada magaaladda Afmadow badhtankeeday yaalaan in saxaafadda loosoo bandhigo oo dadku arkaan weeye waxa loosoo qaaday, todoban nin ayaa hada halkan la keenay oo isugu jira Cadaan iyo Madow oo ajaanib ah cidkasta oo rabta inay soo aragto way u imaankartaa waana ka qanci kartaa,” sidaas waxaa yiri Col: Maxamed Cabdi Xasan oo u hadal ciidamada Dawlada ee Jubooyinka.
Sidoo kale Col Maxamed Cabdi wuxuu sheegay inuu yar yahay khasaaraha dhanka ciidamadda Dawlada soo gaarey,wuxuuna sheegay in dhankooda uu ka dhaawacmay hal askari.
Majiraan ilo madax banaan oo laga heli karo wararka Xaqiiqada ah ee dagaalka maanta ka dhacay Jubadda Hoose, sidoo kale waxaan ilaa hada ka hadlin dagaalka ururka Al-shabaab.
Magaalada Kismaanyo oo ah Magaalo muhiim u ah ururka Al-shaab iyo taatikooyinkiisa dagaal ayaa xiligan u muuqata mid dawlada iyo xulufadeedu usoo jeesteen qabashadeeda, waxaana tani dhabar jab kii u weynaa ku tahay ururka Al-shabaab oo maalmo ka hor laga saaray magaaladda Marka ee Sh/hoose.
Al-nuur Baran oo ku guulaystay tartankii ka socday Daljir, iyo xafladii gabagabada oo ka dhacday Boossaaso.
Golaha ammaanka oo walaac ka muujiyay dilkii loo gaystay qof ka tirsanaa shaqaalaha gargaarka.